केही भ्रम टुटेपछि.. :: सविता विमली :: Setopati
सविता विमली काठमाडौं, भदौ १७
वाह, शीर्षक नै मीठो! पढ्न सुरू गरेँ। मेरो उत्साहको पारो दसौं अनुच्छेदमा पुग्दा घटिगयो।
नेपाली राजनीतिमा विकल्पका रूपमा आफूलाई दाबी गरिरहेको तपाईं आवद्ध विवेकशील नेपालीको स्थापनादेखि यसलाई चासोका साथ हेरिरहेकी छु। देशमा अझै एउटा सार्थक परिवर्तनको खाँचो छ। त्यो परिवर्तन राजनीतिले नै गर्छ। आजसम्म अभ्यास गरेको राजनीतिले नगरेपछि वैकल्पिक राजनीतिप्रति आम जनमानसको चासो तथा झुकाव बढेको सत्य हो। म पनि त्यही आम सर्वसाधारणको हारमा उभिएकी सर्वसाधारण हुँ।
पत्र पढ्न सुरू गर्दा लागेको थियो, केही त्यस्ता दृश्य पनि वर्णन होला जहाँ आफ्नी प्रियाले लुगा पखालिरहँदा तपाईं लुगा मिचिरहनू होस्! अञ्जनाजीले छोराको टिफिन बनाइरहँदा तपाईं उसलाई स्कुल ड्रेसमा तयार गरिरहनुहोस्...यस्तै...। तर, तपाईं भनिदिनुहुन्छ कि– म ‘कम्प्लेन’ बढी गर्छु, तिमी ‘कम्प्रमाइज’ बढी गर्छौ जस्तो लाग्छ। अझ भन्नुहुन्छ– सायद यही भएर हाम्रो प्रेम सन्तुलित छ। ओहो! यहीँनेर म खर्ल्यामखुर्लुम्म झरेकी छु मिलनजी !
संसार परिवर्तन गर्नुछ, सुरू आफैंबाट गर्ने कि!
तपाईंको सुखी दाम्पत्य जीवनको कामना गर्छु!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १७, २०७६, ०९:२३:००
प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो- मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा अध्यक्षलाई जोडेर अनर्गल प्रचार भयो
बालुवाटारमा ओली र दाहालबीच तीन घण्टा छलफल, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको टुंगो लागेन
सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग बनाउन अर्थले दियो १० अर्बको सहमति
चितवनमा हात्ती आतंक, सवारीसाधनलाई बाटो छेकेर आक्रमण